Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Turkiga oo si weyn loogu soo dhaweeyey Muqdisho
Mogadishu Talaado 17 July 2012 SMC
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Turkiga oo si weyn loogu soo dhaweeyey Muqdisho.
Moqdisho 17, July, 2012, Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Turkiga Sayn Baker Bosdag iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana waftiga si diirran ugu soo dhaweeyey Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde Ra’iisul Wasaare Soomaaliya Dr. Cabidweli Maxamed Cali Gaas iyo xubno ka tirsan Golihiisa Wasiiradda, Xildhibaano Maamulka Gobolka Banaadir iyo Bulshada qaybaheeda kala duwan.
Ugu horayntii Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Turkiga ayaa hadal kooban ka jeediyey dhagax dhiga goob loo cayimay in laga dhiso taawarka laga hago diyaaradaha iyadoona ay fulinayso dhismahaas hay’ad laga leeyahay dalka Turkiga. Mr, Bosdag ayaa sheegay in dowaladda Turkigu ay ka wado magaalada Muqdisho mashaariic kala duwan waxaana sidoo kale uu sheegay inuu meel gaba gabo ah marayo dhismaha isbitaalka Dikfeer lana rajaynayo inuu soo dhamaystirmo dhamaadka sanadkaan iyadoona loo qalabayn doono si casri ah.Waxaa kale oo uu intaas ku daray Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Turkigu in dowaldiisu ka waddo magaalada Muqdisho mashaariic ku wajahan dayactirka Wasaaradaha dowladda. Islamarkaana wuxuu sheegay iney bilaabi doonaan sidii loo dhisi lahaa xaruntii Baarlamaanka Soomaaliya.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Turkiga Mr. Bosdag wuxuu kulan la qaatay Golaha Wasiiradda DKMG, Isagoo uga warbixiyey u jeedka safarkiisa uu ku yimid magaalda Muqdisho oo aheyd inuu indha indhayn ku sameeyo mashaariicda ay dowladiisu ka waddo magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadal kooban ka jeediyey isla goobtaas ayaa uga mahad celiyey dowladda Turkiga sida deeqsinimadu ku jirto oo ay ugu soo gurmadeen Walaalahooda Soomaaliyeed ayna gacan weyn uga geysteen Caafimaadka, Waxbarashada, iyo Adeegyada kale oo muhiim u ah Shacabka Soomaaliyeed, isla markaana mashaariicdii ay ka fuliyeen dalka ay noqdeen kuwa miro dhal ah. Ugu dambayntii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Turkiga ayaa si wada jir ah ugu wareejiyey deeq ka kooban 400 oo kumputer Jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, Iyadoona ay horey Xukuumadda Soomaaliya uga codsatay dowladda Turkiga iney tayeyso Jaamacadaha dalka Soomaaliya.